Hividy iPad ve ianao nefa tsy fantatrao izay iray? Hiezaka hanampy anao aho | Vaovao IPhone
Toni Cortés | | iPad, iPad Air, iPad Pro, maro
Ity taona ity, ny isan'ireo iPads Mahatalanjona. Tsy mbola nisy tamin'ny tantaran'ny Apple ny safidy maodely sy ny haben'ny efijery. Izany dia mety ho fanapahan-kevitra sarotra ny manapa-kevitra amin'ny iPad na iray hafa. Raha efa nanana iray ianao ary hanavao azy io dia tsotra dia tsotra ny anao, satria fantatrao tsara ny azonao atao miaraka aminy sy ny zavatra hangatahinao hataony.
Sarotra kokoa izany raha ny takelaka voalohany misy anao. Tokony hazava tsara ny momba izay hampiasanao azy. Tsy hataoko variana amin'ny endri-javatra na data maro ianao, fa hevitra efatra fotsiny tokony ho fantatrao tsara, ary maneho hevitra momba ny zavatra niainako tamin'ny fampiasana ireo maodely efatra misy. Manantena aho fa manampy izany.
Apple iPad 2021 (avy amin'ny ...
Apple iPad 2020 (avy amin'ny ...
8 Mitovy amin'ny SEAT
Ny iPads rehetra dia misy dikanteny roa: WI-FI, ary WI-FI + Cellular. Amin'ny voalohany dia afaka mifandray amin'ny alàlan'ny Wi-Fi fotsiny ianao, ary amin'ilay faharoa dia afaka mampiditra karatra SIM ianao ary mivezivezy amin'ny fifandraisana an-telefaona 4G. Mora ity iray ity. Raha hampiasa ny iPad lavitra ny tranonao ianao dia aza mieritreritra izany ary raiso ny WI-FI + Cellular. Tsy misy zavatra mampahory kokoa noho ny fitadiavana wifis ho an'ny daholobe hijerena. Ary hadino ny fizarana fifandraisana avy amin'ny iPhone. Ny teôria dia tena tsara, ary mandeha tsara izy io, saingy handevona ny bateria findainao afaka kelikely. Henoy aho. Ahoana raha mazàna ianao dia tsy hamoaka izany eny an-dalambe, mandoa amin'ny 4G.
Eto dia manomboka mihasarotra ny raharaha. Ny fahaizan'ny fahatsiarovana dia manomboka amin'ny 32GB an'ny iPad ka hatramin'ny 1TB an'ny bibidia iPad Pro. Mora ny milaza fa arakaraky ny fahatsiarovanao bebe kokoa no tsara kokoa, raha sendra izany, fa ny mahita ny fahasamihafan'ny vidiny eo anelanelan'ny fahaiza-manao samihafa dia mila mahita fifandanjana ianao mba tsy handanianao vola. Raha ny tokony ho izy, 64GB. Manana mihoatra ny ampy ho an'ny fampiharana sy antontan-taratasy maro ianao. Tsy mila bebe kokoa ianao fa tsy ... ampiasainao hijerena andian-tantara na sarimihetsika lavitra ny tranonao. Manana namana nividy ny 1TB iPad Pro aho raha vao nivoaka. Mandehandeha be dia be amin'ny AVE izy ary mitondra izany hatrany amina andian-tsarimihetsika sy sarimihetsika hijerena ny lamasinina. Io no hany fanamarinana hitako fa manan-kery amin'ny fandaniana ny vola amin'ny fahafaha-manao lehibe.
Fetsy: raha hampiasa azy io ianao raha hijery andian-dahatsoratra mandritra ny fivezivezena amin'ny fitateram-bahoaka, kajio ny fotoana hijerena isan'andro, dia ho fantatrao izay fahaizanao mila manavao ireo fizarana indray mandeha isan-kerinandro. Ampio amin'ny 64 GB ilaina amin'ny fampiharana izay nolazaiko teo aloha, ary ho hitanao fa miaraka amin'ny 128 GB dia manana ampy ho an'ireo horonantsary isan'andro ianao.
Aza manahy momba ny lokon'ny lamosina raha hamono azy ianao
Mora. Aza manahy momba ny lokon'ny lamosina. Hiafaranao eo am-panaovana fonony ilay izy ary tsy hahita azy intsony ianao. Safidio fotsiny ny sary eo aloha, ary manana loko roa fotsiny ianao: Fotsy na mainty. Tsotra, sa tsy izany?
Raha efa mazava momba ireo fiovana telo ireo isika, dia hanazava ny zavatra niainako amin'ireo maodely iPad efatra misy aho, ary ho hitanao fa amin'ny farany dia hanana mazava kokoa ny zava-drehetra ianao.
Apple iPad mini 2021 (avy amin'ny ...
Sarintany. Mazava be. Efijery 7,9 inch. Efatra taona no nampiasako azy, isan'andro, niasa ho toy ny varotra. Mety ampiasaina amin'ny arabe. Tena ilaina ny mividy WI-FI + Cellular. Mifanaraka amin'ny Apple Pencil amin'ny taranaka voalohany, notepad mety indrindra izy io. Nametraka tendrombohitra mihitsy aza aho tao anaty fiara ary nampiasaiko ho GPS. Tonga lafatra amin'ny asa.
IPad maina. Tsy misy anarana. IPad 9,7-inch ambaratonga fidirana. Io no maodely mora indrindra amin'ny iPad, izay tsy midika hoe tsy mandeha izy io. Ampidiro amina processeur fusion A10 miaraka amina hery ampy hihetsika mora amin'ny mpandika teny, manova sary na horonan-tsary ao amin'ny 4K. Izy io koa dia mifanaraka amin'ny kinova voalohany amin'ny Apple Pencil. Mety ho an'ny mpianatra: mandray an-tsoratra, manitsy PDF, manao sary sns. Tonga lafatra amin'ny fijerena atiny audiovisual ao amin'ny Netflix, HBO, sns. Mpandeha amin'ny lafiny maro sy ara-toekarena. Takelaka tsara ho an'ny fianakaviana manontolo, tanora sy antitra. Mazava ho azy, tsy manoro ny kinova 32 GB aho, afaka mandeha amin'ny foara kely izy io. Raha vitanao dia alao ilay manaraka, ilay 128GB. Ny idealy dia 64GB, fa tsy misy.
Miakatra ny takelaka hafa, na amin'ny fampisehoana na amin'ny mpanodina. Mametraha vaovao Efijery 10,5 inch tena tonony, ary iray amin'ireo processeur farany an'ny Apple, ny A12 Bionic miaraka amin'ny Neural Engine. Betsaka ny filokana ho an'ny ho avy noho ny ankehitriny. Raha ampitahanao amin'ny fahombiazany amin'ny iPad teo aloha teo amin'ireo rindranasa izay hampiasainao isan'andro dia tsy hankasitraka ny fahasamihafana be ianao, ankoatry ny efijery, mazava ho azy. Miaraka amin'ity puce A12 ity dia azonao antoka ny fahombiazana maharitra mandritra ny taona maro. Azo antoka fa tsy 13 intsony ny iOS, fa ny 14 na 15 dia hihazakazaka tsy misy olana amin'ny iPad Air. Manana kinova 64GB mety ianao. Tsy fitaovana intsony ho an'ny fianakaviana iray manontolo io fa faniriana manokana manokana.
2021 Apple iPad Pro (avy amin'ny ...
Biby volontany. Efatra volana no niarahako taminy ary nahafaly azy izany. Io no iPad lehibe indrindra amin'ny resaka efijery sy fikirakirana. Azonao atao ny mividy azy amin'ny Fampisehoana 11 na 12,9 santimetatra amin'ny Fisondrotana 120 Hz. Mametraha processeur A12X Bionic miaraka amin'ny Neural Engine, ary Fahatsiarovana RAM 4 GB. Heveriko fa tsy misy fampiharana amin'ny Apple Store iray manontolo izay mahatonga ny A12X hiasa amin'ny fahafaha-manana 50%. Angamba rehefa mamoaka ny Photoshop feno ho an'ny iOS i Adobe, ary manonta sary mavitrika avo lenta misy sosona marobe isika, dia terentsika hiasa amin'ny fahaizany feno ny processeur. Miaraka amin'ireo fampiharana mahazatra isika rehetra dia mampiasa isan'andro, mizaha, mailaka, tambajotra sosialy, ary sehatra video, tsy mikorontana ny CPU.
Manana a hatsaran'ny feo mahatalanjona. Izy io dia manana mpandahateny efatra, roa isaky ny lafiny iray, manome traikefa anaty lalina. Nahena ho ambany farafahakeliny ny rafitra, satria tsy manana bokotra an-trano izy. Niainga tamin'ny fanekena ny rantsantanana mankany Face ID, navoaka tao amin'ny iPhone X. Olana manokana hanatsarana azy io. Izy io dia manana ny fakantsary eo afovoan'ny tapany ambony, amin'ny toerana mijidina. Tonga ny olana raha mampiasa azy amin'ny tontolo. Matetika aho no mitazona izany amin'ny tanako havia, raha mampiasa azy amin'ny tanako ankavanana aho, manarona ny fakantsary ary manao izay tsy azo atao ny mamoha amin'ny alàlan'ny famantaran-tarehy. Raha tanana havia ianao dia tsy hanana izany olana izany intsony.
IPad Pro. Ny matanjaka indrindra azontsika jerena ankehitriny.
Fahafinaretana iray hafa koa ny Apple Pencil taranaka faharoa. Adinoy ny tariby hameno ny volony. Io dia miakatra amin'ny alàlan'ny fampidirana amin'ny sisin'ny iPad Pro. Manana azy ireo manana fahaiza-manao ianao manomboka amin'ny 64GB ka hatramin'ny 1TB. Eny, eny, Terabyte iray. Amin'izao fotoana izao, ny hany mahasamihafa azy amin'ny laptop rehetra dia ny iOS, raha ampitahaina amin'ny MacOS na Windows. Fa amin'ity volana septambra ity dia hiova. Miaraka amin'ny iOS 13, azonao atao ny mampiasa ny totozy bluetooth, ny tranonkala browser safari feno ny manager download, sns Avy eo tsy hisy fahasamihafana intsony eo amin'ny iPad Pro sy ny solosaina finday.
Mitovy amin'ny SEAT
Ny elanelan'ny iPads dia azo ampitahaina amin'ny isan'ireo fiara misy marika, toy ny SEAT, ohatra
Raha ampitahaintsika ny fiara samihafa an'ny SEAT, ohatra (tsy marika iray, satria ho an'ny BMW na Mercedes Benz ny vidiny sy ny vidiny) dia afaka milaza isika fa ny iPad Mini dia SEAT Mii, ny kely indrindra ao amin'ilay faritra. Ny iPad an Ibiza, ekonomika ary mahavariana. Avy eo ny iPad Air, AronaHoy aho, ary farany ny iPad Pro, 300 hp Ateca Cupra.
Manantena aho fa aorian'ity lahatsoratra ity dia manana mazava kokoa ianao hoe ny iPad izay mifanaraka indrindra amin'ny zavatra ilainao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Hividy iPad ve ianao nefa tsy fantatrao izay iray? Hiezaka hanampy anao aho
“Tonga ny olana raha mampiasa azy io amin'ny tontolo. Matetika aho no mitazona izany amin'ny tanako havia, raha mampiasa azy amin'ny tanako ankavanana aho, manarona ny fakantsary ary manao izay tsy azo atao ny mamoha amin'ny alàlan'ny famantaran-tarehy. Raha tanana havia ianao dia tsy hanana izany olana izany intsony. "
Efa nanandrana namadika azy ve ianao? Manana iPad Pro 12,9 "aho, ary tsy maninona na eo ankavanana na ankavia ny fakantsary. Ny famolavolana efijery dia mamela izany amin'ny tsy fananana bokotra an-trano.
Toni Cortés dia hoy izy:
Eny, mazava ho azy, raha tsy misy fonony dia tsy misy olana, ahodinao io dia izay. Amin'ny tranga misy ahy, miaraka amin'ilay tranga itondrako azy, ny mpihazona pensilihazo eo an-tampony sy ny vala hitana ny iPad eo ambany dia mahazo aina kokoa, ary raha manana ny bokotra volume ianao dia tsy afaka mamadika ny iPad ary manery anao hanana fakan-tsary eo an-tampony havia. Na hanova ny fonony (tsy tiako ilay izy, tsara ho ahy io) na milalao tanana havia aho… Arahaba!
Jana dia hoy izy:
hace Andro 4
Ja planiram da kupim ipad samo zbog crtanja. Zato mi nije potrebna neka ogromna memorija, mislim da bi 64 bilo totalno dovoljno. Ao ny hee bitno da bude veci. Mislim negde 11 Inca pa nadalje. Sad se razmisljam izmedju obicnog Ipad-a i IpadAir-a, koja je razlika? , i da li je pametnije uzeti bolji cak iako necu koristiti neke opcije, npr ovaj wifi cellular mi je skroz nepotreban. Takodje olovke, prva i druga, mislim da bi mi ova druga bolje pristajala.
Valiny tamin'i Jana
Ity pejy ity dia pejy iray nalaina ary nodikaina avy amin'ny iPad Air, ny Apple Pencil 2. Ny iPad iPad dia mifanentana amin'ny Apple Pencil 1, izay misy valiny lehibe indrindra.
Ny beta fahenina an'ny iOS 13 ho an'ny mpamorona dia efa misy